ओली माथि भूकम्प नेपाली कांग्रेसले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन खेल्यो येस्तो खेल ! – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/ओली माथि भूकम्प नेपाली कांग्रेसले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन खेल्यो येस्तो खेल !
काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रदेश सरकारमा देखिएको संकटसँगै कांग्रेसले नेकपा प्रचण्ड–नेपाल पक्षले दर्ता गराएको अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा मत हाल्ने खुलासा गरेका छन् ।
मोरङको विराटनगरमा शनिवार पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै पौडेलले कांग्रेस प्रतिपक्षी भएकाले सत्ताधारी केपी शर्मा ओली पक्षको विपक्षमा बस्ने प्रतिपक्षीको धर्म निर्वाह गर्ने बताएका छन् ।
१ नम्बर प्रदेश र बागमती प्रदेशमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट मुख्यमन्त्री क्रमशः शेरधन राई र डोरमणि पौडेलवि’रुद्ध नेकपा प्रचण्ड–नेपाल पक्षले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । यस्तो बेला कांग्रेसले प्रचण्ड–नेपाल पक्षमा मतदान गर्ने खुलासा नेता पौडेलले गरेका छन् ।
बागमती प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेश सभामा टेबुल भइसकेको छ भने १ नम्बर प्रदेशमा बुधवार हिउँदे अधिवेशन सुरू भएर अनिश्चितकालका लागि सदन स्थगित गरिएको छ । ‘केन्द्र र प्रदेश दुवै ठाउँमा कांग्रेसले प्रतिपक्षीको धर्म निर्वाह गर्नेमा शं’का गर्नुपर्दैन,’ नेता पौडेलले भने, ‘प्रदेश सभामा अविश्वासको प्रस्ताव आएपछि सत्ताधारीको विपक्षमा कांग्रेसले भोट हाल्छ ।’
नेपाली कांग्रेसले प्रदेश सभामा अविश्वासको पक्षमा मतदान गरेपछि मुख्यमन्त्री राई र बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री पौडेल विरुद्धको अविश्वास प्रदेश सभामा सिद्ध हुने र पदमुक्त हुने अंकगणित रहेको छ । पौडेलले कांग्रेसका लागि यतिबेला दोहोरो संकट आएको बताएका छन् । ‘देशको संविधान जोगाउनुका साथै पार्टीको महाधिवेशन गरेर विधान जोगाउने चुनौती छ,’ पौडेलले भने ।
पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा पनि महाधिवेशन गराएर पार्टीको विधान र संविधान जोगाउने पक्षमा रहेका पौडेलले बताएका छन् । ‘पार्टी सभापति देउवाजीले बाहिर कता के–के बोल्नुभयो तर उहाँ संविधान जोगाउन र पार्टी महाधिवेशनको पक्षमा हुनुहुन्छ,’ पौडेलले भने, ‘प्रधानमन्त्री ओलीको कदम असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, प्रतिगमनकारी र सर्वसत्तावादको बाटो लिएकाले सच्चिनु पर्ने पार्टीले निर्णय गरिसकेको छ ।’
पार्टीको निर्णयवि’रुद्ध कोही दायाँबायाँ नजाने विश्वास पौडेलले व्यक्त गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसको निर्णयले पार्टीमा २ वटा लाइन नभएको स्पष्ट भएको पौडेलले बताएका छन् । ‘कांग्रेस संविधान बचाउन चाहन्छ तर निर्वाचन बहिष्कारवादी होइन,’ पौडेलले भने, ‘कांग्रेसले संविधानमा टेकेर निर्वाचनमा जान चाहन्छ ।’
अदालतको फैसला अत्यन्तै धैर्यका साथ पर्खेर बसेको पौडेलले बताएका छन् । ‘राष्ट्र जोगाउने एउटा मात्रै आधार सर्वोच्च अदालतका न्यायमूर्ति हुनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा छ,’ पौडेलले भने, ‘राष्ट्रलाई बर्बादीतर्फ, बिग्रह, हिंसा र अफगानिस्तानको बाटोमा जान नदिने सबैको धर्म हो ।’
त्यसैगरी : प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री हुन बारम्बार ज्ञानेन्द्रसँग बार्ता गरेका कुरा मितेरी अस्पतालका संचालक बिरेन्द्र झापाली र डिआर लामिछाने साक्षी छन् । लामिछानेको मृ’त्यु भैसकेपनि झापाली छन् । दोस्रो वार्ताकालमा सिधै ज्ञानेन्द्र र प्रचण्डको वार्ता गराउने मध्यस्थकर्ता यी दुइ थिए । जब प्रचण्ड बसेको ठाउँमा राजा ज्ञानेन्द्रबाट सैनिक परिचालन भयो, त्यसपछि बाबुरामको शरणमा पुगेर प्रचण्ड बाबुरामको लाइनमा पुगेका हुन्
कुनैपनि ब्यक्तिलाई बिचार, क्षमता र योग्यतामा पराजित गर्न सकिएन भने उसको चरित्रमा प्र’हार गर्नुपर्दछ । यदि चरित्र पनि ठिकै छ भने उसको भनाईलाई समाउनु पर्दछ । उसको स्वभावलाई केलाउनु पर्दछ । यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग चिढिएकाहरुले ओलीको अभिब्यक्त वा भनाईहरुलाई मिसनमा हालेको पाइन्छ । कुनैबेला ब्यक्त गरेका आफ्ना भनाईलाई टार्गेट गरेर बारबार ओलीको मर्ममा प्र’हार गर्दा उनीहरु नांगिएको कमैले मुल्यांकन गरे होलान ।
प्रसंग हो समृद्धि र राष्ट्रियताको अडानमा दृढतापुर्वक खडा हुँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि प्रहार गर्न क्वाइन गरिएको एउटा भनाई । बिहिबार माधव–प्रचण्ड समुहले फेरि पनि ओलीलाई बयलगाडा शब्दले प्र’हार गरे । कमरेड प्रचण्डले बारम्बार भनिरहे ‘जब हामी राजसंस्थाको बि’रुद्धमा आन्दोलन गर्दा’ उहाँले ‘बयलगाडामा चढेर अमेरिका पुगिन्न’ भन्नुभयो । उहाँ गणतन्त्र बि’रोधी हो भन्नुभयो । यसो भन्दैगर्दा प्रचण्ड आफैं कति खुइलिए भन्ने उहाँलाई हेक्का छैन । अब धेरै उता नगइकन २०५७ देखि यता गणतन्त्र, संघीयता र बयलगाडामा विश्लेषण गरौं ।
आफ्नै सहकर्मीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने खेलमा नलागेको भन्दै चारैतर्फ उनको आलोचना भएपछि उनले ०६८ सालमा बाबुराम भटृराईलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरे । रामचन्द्र पौडेललाई हराएर बाबुराम भटृराई संविधानसभाबाट प्रधानमन्त्री चयन भए । सोही वर्ष २०६९ साल जेठ २ गते बाबुराम भटृराइको समितिले संविधान जारी गर्दैथियो । देव गुरुंगले सबै ड्र्राफ्ट गर्दैथिए । प्रचण्डको लोकप्रियता घट्दै थियो र बाबुराम लोकप्रियताको शिखर चढ्दै थिए, अब संविधान बाबुरामले ल्याउनेछन् भन्ने भयबाट रातरात असफल बनाइयो र ०६९ कै जेठ १४ मा संविधानसभा भंग गरियो । यो भंग हुनुमा प्रचण्डको हात छ । इतिहासमा दुर्भाग्यका रुपमा यो घ’टनालाई लिइन्छ । बाबुराम भटृराईले संविधान जारी गर्न नसकेपछि राजीनामा दिए । यस घटनाभन्दा अघि फेरि एकपटक पछाडि फर्कौ ।
प्रचण्डले बिगतमा भारतलाई नि’म्त्याएका हुन
नारायणकाजीको साथ पाएपछि प्रचण्डले कहिले मोहन बैद्यलाई कहिले बाबुरामलाई पेल्ने गरेपछि ०६९ सालमा बैद्यहरु फुटे । बाबुरामले पार्टी पुर्नसंरचना गरौं भन्दा प्रचण्डले पार्टीलाई पारिवारिक लिमिटेड बनाइदिए । सबै परिवार नातागोतालाई केन्द्रीय समिति बनाइदिए । पहिलो संविधानसभा पनि प्रचण्डकै कारण भाँडिएको पी’डा एकातिर बाबुरामहरुलाई थियो । त्यसअघि बाबुरामको राजीनामापछि पार्टी महाधिवेशनतिर लाग्यो भने प्रचण्डले भारतलाई गु’हारेर खिलाराज रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री र चुनावी सरकार वनाउन सहयोग गर्न लगाए ।
यस पंक्तिकारलाई एकदिन बाबुरामका राजनीतिक गुरु मानिने एसडी मुनीले भने–‘तिम्रो देशमा अबको पीएम सीजे हो ।’ मुनीले एकमहिनाअघि बताएका थिए यी कुरा । मैले तत्कालिन सौर्य दैनिकका प्रधानसम्पादकलाई भनेको पनि थिएँ । मेसेजसहित पठाएको थिएँ यस बारेमा । यसरी प्रचण्डले त्यतिबेला भारतलाई देश चलाउन आव्हान गरे । जसबाट नेपालको इतिहासमा खिलाराज रेग्मी नेपालको कार्यकारी भएर आए । यही प्रवृति यसपटक पनि गर्न खोजेका थिए । श्रीमतीको उपचारका नाममा तर भारतको मौनता देखेपछि उनी नेपाल आएर भारतको मौनता रहस्यमय भन्दै भारतको इशारामा केपी ओलीले संसद वि’घटन गरेको उल्टै आ’रोप लगाए ।
पहिलो दिनको निषेधाज्ञा : ‘सिधासादा’ लाई सम्झाइयो, ‘बढी हुन खोज्ने’ लाई कारवाही